စား ဆီ နှင်. ပါတ် သက် သည် တိ ကျ သော မူ ဝါ ဒ ၊ စီမံကိန်း ????????? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စား ဆီ နှင်. ပါတ် သက် သည် တိ ကျ သော မူ ဝါ ဒ ၊ စီမံကိန်း ?????????
စား ဆီ နှင်. ပါတ် သက် သည် တိ ကျ သော မူ ဝါ ဒ ၊ စီမံကိန်း ?????????
Posted by Knowledge Seeker on Jul 8, 2012 in Copy/Paste |4comments
မြေပဲကုန်ကြမ်းကို တရုပ်ပြည် မှ ဈေးကြီးပေးဝယ်ယူနေသောကြောင်.ဆီထုပ်လုပ်ရန်ကုန်ကြမ်း မကျန်ရှိသဖြင်. မြန်မာနိုင်ငံရှိဆီစက်များ အားလုံး ထုပ်လုပ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားဖွယ်ရှိသည် ဟု အထက်မြန်မာပြည် ဆီကုန်သည်များအသင်း ဥက္ကဌ ဦးကိုကြီးက The Voice Weekly သို.ပြောကြားသည် ဟု သိရပါသည်။
ဆီထွက်သီးနှံအချိုု.ကို ပြည်ပသို.တရားဝင် အစိုးရာ တင်ပို.ခွင်.ပြုခဲ.သည်.တချိန်ထဲမှာပင် တစ်နိုင်ငံလုံး တစ်လစားသုံးဆီ လိုအပ်ချက်မှာ တန်ချိန် ၅ သောင်းခန်.ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း အနက် မှ တန်ချိန်၃ သောင် ရှိ စားအုံးဆီများ ( transfat ပါဝင် ပြီး နှစ်လုံး ရောဂါ ဖြစ် ပွား စေ နိုင် သော – the palm oil contains palmitate (44%, saturated) and saturated fat intake increases both LDL and HDL cholesterol which cause the heart diseases ) ကို ယ္ခင်အစိုးရစိတ်ကြိုက် Cronies များကို တင်သွင်းခွင်.ပြုထားပါသည်။ သို.မျှသာမကသေး ကျန်လိုအပ်ချက် ဆီတန်ချိန် ၂ သောင်းမှာ လည်းပြည်တွင်း ဆီထုပ်လုပ်မှု နှင်.မလုံလောက်၍တရားမဝင် ဆီများ (မြာင်းထဲမှရသည်.ဆီဟောင်များကိုပြန်လည်သန်.စင်ထားသည်.ဆီများ၊ ကြော်ဆီဟောင်များကိုပြန်လည်သန်.စင်ထားသည်.ဆီများ) ဝင်ရောက်နေလျက် ရှိ သည်။
စားဆီနှင်.ပါတ်သက်၍ ပြည်တွင်း စားသုံးမှုမလုံလောက်လျှင် ဆီကုန်ကြမ်းသီးနှံ ကို အစိုးရာမှ တင်ပို.ရောင်းချ ခွင်.မပြုသင်.ပေ။ တစ်ချိန်ထဲမှာပင် ဆီကုန်ကြမ်းသီးနှံလုံလောက်စွာစိုက်ပျိုးထုပ်လုပ်ရေးကို မူချရွေ.ဆောင်ရွက်သင်.ပေသည်။ အန္တရာယ် ရှိ သောစားဆီ များတရားမဝင် ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိရအောင်လည်း တင်းကျပ် စွာတားမြစ်သင်.ပေသည်။
ဆီကုန်ကြမ်းသီးနှံ ကို ပြည်ပသို.တင်ပို.ခွင်.ပြုမည်.အစား ပဲဆီ၊နှမ်းဆီ ကုန် ချောကိုသာ တင်ပို.ခွင်.ပြုမည် ဆိုလျှင် ပြင်တွင်း လုပ်ငန်းများ ကို အား ပေး ရာ ရောက် ရုံသာ မက ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင်အခွင်.အလမ်းများဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ကျန်းမာရေး နှင်.ညီသော ဆီကို ပြည်သူများစားသုံးကြရမည်ဖြစ်သည်။ အစပိုင်းတွင် နည်းပညာ အခက်အခဲ ၊ အရင်းအနှီး အခက်အခဲ ၊ စားဆီ မလုံလောက် မှု အခက် အခဲ များ ရှိ နိုင် သော် လည် ရေ ရှည် တိုင်း ပြည် လူမျိုး အတွက် အကျိုး ရှိမည်. ကျန်မာ အသက်ရှည် မည်.ISO အဆင်.မှီ ပြည်တွင်စားသုံးဆီ ထုပ်လုပ်ရေး ၊ ပြည်ပ တင် ပို.နိုင် ရေး ကို တိကျသော မူဝါဒ စီမံကိန်း ချ၍ဆောင် ရွက် သင်.လှပေသည်။
ကုန်ချောတင်ပို့တော့ ဈေးလည်းပိုရ နိုင်ငံအတွင်းစက်ရုံများလည်းလည်ပတ် အလုပ်သမားများလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိ ပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းသောဆီစားသုံးရ၍ ကျန်းမာရေးရှုထောင့် အနေဖြင့်လည်းကောင်း ………….. ပို့စ်လေးကိုထောက်ခံသွားပါတယ်
စားသုံးရန် မသင့် သော ဆီ နှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အခြား အစားအစာ ၊ ကလေး စား မှုန့် ၊ နို့ ၊ နို့မှုန့် ၊ အစားအစာသုံး ဓာတု ပစ္စည်းများ တင်သွင်းတဲ့ သူတွေကို တရုတ်နိုင်ငံ နည်းတူဘဲ ပစ်ဒဏ် ကြီးကြီး ပေးသင့်ပါတယ်။ တဆက်တည်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆိုတာ အရေးကြီးပါ။ ဥပဒေလက်တလုံးကြား လုပ်လို့မရအောင်၊ နောက်ပြီး အခုတမျိုး၊ တော်ကြာတမျိုးတွေ မရှိအောင် လဲ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဆီ ဆီစားလို့အသားမဖြစ် ဆီကိုလျော့ ကျစွာသုံး စွဲခြင်းသည်သာကျန်းမာရေးကိုကာကွယ် သည်။။